विश्वकपका लागि ब्राजिलको २३ सदस्यीय टोली छनोट -
विश्वकपका लागि ब्राजिलको २३ सदस्यीय टोली छनोट
E Naya Khabar Reporter २०७५ जेठ १ गते मंगलवार	| खेलकुद
रियो (एजेन्सी) – ब्राजिल राष्ट्रिय फुटबल टोलीले जुन तेस्रो साताबाट सुरु हुने फिफा विश्वकपका लागि २३ सदस्यीय अन्तिम टोलीको नाम सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रशिक्षक टिटेले घोषणा गरेको टोलीमा पेरिस सेन्ट जर्मेनका फरवार्ड नेयमारको पनि नाम रहेको छ । २६ वर्षीय फरवार्ड विगत केहि महिनायता चोटका कारण मैदान बाहिर रहेपनि प्रशिक्षकले टोलीमा समेटेका हुन् । टोलीमा प्रिमियर लिग च्याम्पियन म्यानचेस्टर सिटीका चार खेलाडी छन् । गोलरक्षक एडरसन, डिफेन्डर ड्यानिलो, मिडफिल्डर फर्नानडीन्हो र फर्व्रद ग्याब्रिएल जेससले टोलीमा स्थान बनाएका छन् । चेल्सीका विलियन र लिभरपुलका रोबर्टो फिर्मिनो पनि टोलीमा अटाए ।
यस्तै एएस रोमा बाट व्यवसायिक फुटबल खेलिरहेका गोलरक्षक एलिसन र कोरिनथियन्सका क्यासिओ पनि टोलीमा छन् । डिफेन्समा रियल म्याड्रिडका मार्सेलोसँगै पिएसजीका थियागो सिल्भा र मार्किन्हस अटाए । यसबाहेक इन्टर मिलानका मिरान्डा, ग्रेमिओका पेड्रो जेरोमेल, एटलेटिको म्याड्रिडका फिलिपे लुइस र कोरिन्थियन्सका फाग्नर छन् ।
मिडफिल्डमा बार्सिलोनाका फिलिप कोउटिन्हो र पाउलिन्हो, शख्तर डोनेस्कका फ्रेड, रियल म्याड्रिडका क्यासेमिरो, युभेन्ट्सका डग्लस कोस्टा र बेजिङका रेनाटो अगुस्टो छन् । फरवार्डमा शाख्तरका टाइसनले फिर्मिनो, जेसस र नेयमारलाई साथ दिनेछन् ।
चोटका कारण पिएसजीका डिफेन्डर ड्यानी आल्भेसले भने टोलीमा स्थान बनाउन सकेनन् । ब्राजिल विश्वकपको समूह ‘ई’ मा छ । ब्राजिलको समूहमा कोस्टारिका, सर्बिया र स्विटजरल्यान्ड रहेका छन् । पाँच पटक वल्र्डकपको ट्रफी उचालेको ब्राजिल सदा झै यसपटक पनि ट्रफी उचाल्ने लक्ष्यका साथ रसिया जादैछ ।
229 पटक हेरिएकाे
पछिल्लाे - साँच्चै शताब्दी टेक्दै शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी
अघिल्लाे - दर्जनौं मारिने गरी जारी जेरुसलेम विवाद किन?
भदौ ११ काठमाडौँ, ः बंगलादेशमा यही भदौ १९ गतेदेखि आयोजना हुने साफ...
सप्तकोशी पानी जहाज लोकप्रिय बन्दै (हेर्नुहोस भिडियोमा कसरी दौडिन्छ पानी जहाज ?)
जानुका कार्की बेलका, जो सुनसरीको धार्मिक क्षेत्र दर्शनको लागि पुग्छ, उसलाई जेट...
गाईघाट राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् मातहतमा रहेको नेपाल खेलकुद विज्ञान प्रतिष्ठान (सान)ले शुक्रबार...
काठमाडौँ, ४ जेठ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को आयोजना एवं नेपाल इन्टरनेशनलको व्यवस्थापनमा...
रियो (एजेन्सी) – ब्राजिल राष्ट्रिय फुटबल टोलीले जुन तेस्रो साताबाट सुरु हुने...
सबैभन्दा धनी १० फुटबल खेलाडी, कसको सम्पत्ति कति ?
काठमाडौं, २३ वैशाख फुटबल प्रंशसकका लागि सँधै चासोको विषय हो, फुटबल खेलाडीको...